Maxaa ka jira inay magaalada Hargaysa maanta ka degeen duullimaadyo caalami ah? (Wararkii ugu dambeeyay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxaa ka jira inay magaalada Hargaysa maanta ka degeen duullimaadyo caalami ah?...
Maxaa ka jira inay magaalada Hargaysa maanta ka degeen duullimaadyo caalami ah? (Wararkii ugu dambeeyay)
(Hargaysa) 20 Maars 2020 – Wararka ka imanaya magaalada Hargaysa ayaa tibaaxaya in maanta oo Jimce aanay jirin wax diyaarado ah oo ka soo degay magaalada Hargeysa, iyadoo ay gebi ahaanba istaagtey shaqadii ka socotey Garoonka.
ETHIOPIAN Airlines, oo mar kale maanta la filayay in ay soo caga-dhigato Garoonka Caalamiga ah ee Cigaal ayaa markale baaqatay, iyadoo rakaabkii oo markan quustay la sheegayo inay ka gudbayeen magaalada xuduudda ku taalla ee Wajaalle, si ay Jigjiga uga duulaan, una gaaraan Addis Ababa, halka qaarkood ay ilaa Addis dhulka u mari doonaan.
Waxaa beenoobey warar lagu faafiyey barashada bulshada oo sheegayey in ay soo degtey dayuuradda Ethiopian Airlines, si uu sheegay hilibka Saab TV oo soo xiganayey ilo wargal ah oo garoonka ku sugan.
Shalay ayaa waxaa sidoo kale hawada Gobolka Woqooyi Bari ee Somalia waxaa laga celiyey diyaaradda Fly Dubai sida raadeerka ka muuqata, taasoo ka degi lahayd Hargeysa.
Waxaa iyana baaqatay dayuuradda EA oo isla halkaa ku wajahnayd barqadii 11:00 AM.
Hay’adda Duullimaadyada Rayidka ah ee DF Somalia (SCAA) oo sanadkii tegey si rasmi ah loogu wareejiyey maamulka hawada Somalia oo muddo dheer laga maamulayey Nairobi, ayaa joojisey duullimaadyadii rakaabka iyo xamuulka ee Somalia iman jirey, caabuqa Coronavirus dartiis, kaasoo shalay oo loo muddeeyay toos u dhaqan galay.
Previous articleKenya oo durba dareentay xanuunka joojinta JAADKA (Imisa ayaa Muqdisho oo qura maalintii Jaad kaga baxda?)
Next articleDEG DEG: Madaxdii DF ka socotey ee ka qayb gashay shirkii Garoowe oo qaaddacay qodobo kasoo baxay shirkaasi (Arag qodobbada)